” တွယ်မည် ဆယ်လဖီ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ” တွယ်မည် ဆယ်လဖီ “	8
” တွယ်မည် ဆယ်လဖီ “
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Mar 8, 2016 in Photography | 8 comments
” တွယ်မည် ဆယ်လဖီ ”
Thint Aye Yeik says: . . . အော် . . . ခေတ် ခေတ်. .
kotun winlatt says: တွယ်မည်
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ကိုယ်တိုင်ဆယ်လဖီဆွဲတဲ့ပုံလေးပါတင်လိုက်ရမှာကိုပေါက်ရ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မရှိဘူး ကိုမိုက်
Ma Ma says: အိုင်ဒီယာလေး မိုက်တယ်။
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး ကိုပေါက်ကြီးတစ်ယောက် ဆယ်ဖီဆွဲထားတဲ့ပုံတွေများ တက်လာမှာလားလို့။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ရုပ်ကြမ်းကြီးဆိုတော့
ဆယ်လဖီ ဆွဲလို့မရ ဘူးလေ
အောင် မိုးသူ says: ကိုယ်တွေ ဆဖီခဲ့တာ လွန်ခဲ့ခြောက်နှစ်ကတည်းက ဟိဟိ
Fall Guy says: ရုပ်​ကြမ်းကြီးနဲ့ အဘ​ပေါက်